Soomaaliya “wax kama qaban kufsiga”. – idalenews.com
Hay’adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Human Rights Watch ayaa dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab ku eedeysay xadgudubyo ka dhan ah aadanaha
Dowladda ayey Hay’addu warbixinteeda ku sheegtay in intii lagu guda jiray sanadkii 2013-ka ay ku guuldareysatay in ay wax ka qabato dhibaatooyinka ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhaca caasimadda, Muqdisho.
Leslie Lefkow, oo ah Agaasime kuxigeenka Afrika ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay aheyd in sanadkii 2013-ka waxbadan ka qabato dhaqanka baahay ee isla xisaabtan la’aanta iyo sidii lagu soo gabagabeyn lahaa tacadiyada xagga kufsiga ee ka dhaca dhulka ay maamusho.
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warbixinno ay horey u soo saareen hay’adaha xuquuqda aadanaha oo loogu eedeynayay xadgudubyo ka dhacay Muqdisho.
Dhageyso Danjire David Shin oo sheegay in ku biirista Itoobiya ee AMISOM ay tahay khalad kale oo la galey